Banyere Anyị - Aquark Electric Co., Ltd
Elekwasị anya na Okpomọkụ mgbapụta nke R & D na Manufacturing
Aquark bụ ọkachamara inverter ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta emeputa na Guangdong, China. Ọ tọrọ ntọala site na otu ọkachamara otu na afọ 20 nke ọkachamara okpomọkụ mgbapụta ahụmahụ.
Aquark nwere otu ìgwè nke omiiko ulo oru na-emepụta. Ha na-asọpụrụ ahịa & ahịa na ike ịtụnanya Mr. nkịtị slab imewe. Ha ga na-eke ihe na-ewu ewu aghụghọ n'ihi na kacha mma ahịa ahụmahụ.
The isi ike nke Aquark bụ R & D otu, ndị nwere ndị na-eduga inverter akara usoro technology nakwa dị ka ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta usoro technology. Kwa engineer jupụtara echiche inwere site na omenala technology nke ọdọ mmiri okpomọkụ nfuli, àjà ohuru ngwọta na anyị zuru ụwa ọnụ mmekọ.
Jighi Quality Production
Aquark omenala na-mgbe na-agba ume na ihe ọhụrụ na-anọgide na-na àjà ohuru ngwọta anyị zuru ụwa ọnụ mmekọ. Anyị R & D otu mepụtara 1st patented slab imewe inverter na pụrụ iche airstream ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta na ụlọ ọrụ.